Posted on December 12, 2020 December 12, 2020 by mysansar
(January 2nd, 2014 मा माइसंसारमा पहिलो पटक प्रकाशित)
8 thoughts on “महिलाले गर्ने हिंसाबाट पीडित पुरुष”
Sarmila ji, purush hinsha naganya hunu ko kaaran pani lekh ma ullekh cha. Mahila hinsa ko photo dekhaera afno bhudi varne lai ali ashaj lagna sakcha yo lekh.
himsa himsa nai ho, maile ta dajnu parne dekhina, “kunai pani himsa bata mahila pani pidhit hunu vayena -purus pani pidhit hunu vayen mahila bata” mero bujhae cahi saral khalko chha hai
वास्तवमै लैगिक समानता अपरिहार्य छ । हालैका दिनमा पुरुष हिंसा धेरैनै बढेको पाएको छु । यो लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लेखक ज्यूलाई ।
सबैले आफ्नै दिमागि हिसाबले बुझ्छन् लेखलाई।
महिला हिंसालाई दबाउन खोज्ने र तपाईँमा के फरक भयो सर्मिलाजी?
नारायणकाजी श्रेष्ठको video प्रकरण बारे blog बनाउनु पर्यो। हुन त onlinekhabar.com ले report publish गरीसक्यो तर अली विस्तृतमा बुज्न पर्‍यो वास्तविक्ता।
पुरुष हिंसाको नगण्य घटनालाई इस्यु बनाएर महिला हिंसालाई दबाउने प्रपञ्च हो यो लेख
हो मैले पनि धेरै देखेको छु महिलाबाट पीडित पुरुषहरु। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरु नेपालमा रहेका महिलाबाट बढी पीडित हुन्छन्